"Nemesis" uye "Iyo Nhema Dahlia". Kudzokorora kweNesbø naEllroy | Zvazvino Zvinyorwa
"Nemesis" uye "Iyo Nhema Dahlia." Kudzokorora kweNesbø naEllroy
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Nhema nhema
Jo Nesbø naJames Ellroy muBarcelona. San Jordi, 2015.
Rima Mbudzi neaya maviri emazita anoburitsa zvakare Dema Dahlia, James Ellroy's classic, iyo Mad Imbwa yeAmerican nhema mabhuku, Inobudiswazve neshanduro nyowani muchiSpanish uye nesumo remunyori.. Chairo rinotevera gore rinoratidza makore makumi matatu kubvira payakaburitswa kekutanga.
Uye kubva kuna Jo Nesbø, pamwe munyori anozivikanwa kwazvo werudzi rwevatema venyika dzinotonhora dzeNordic, inodzoreredzwa Nemesis. Ndiyo yechina nhoroondo mune akateedzana neako anonzwira tsitsi muongorori Harry Hole.. Kune avo vari kumuwana mune ino nyowani Tsvuku neDema kuunganidzwa, uko unayo. Ose ari maviri akagadziriswa neboka reRandom House kutsikisa.
1 Mutema Dahlia - James Ellroy
2.1 Nei uchiaverenga
Dema Dahlia - James Ellroy
Rakakosha zita mune rakakura uye rakasimba basa remunyori weLos Angeles James Ellroy (1948). Ndiyo yokutanga yokufungidzira inonzi Los Angeles Quartet.
Inobatanidza misoro mikuru uye inodzokororwa yemunyori anopokana uyu, uye izvo zvinogara zvine zvakadzika nhoroondo nhoroondo: huwori pamatanho ese, kunyanya mapurisa nevezvematongerwo enyika, mhosva, kutengesa ... Hunhu hwakashata hwevanhu mune zvakasikwa zveguta rakatodarika chokwadi charo seLos Angeles. Hazvina kumbobvira zvapenya uye zvakasviba senge mune iwo 40s uye 50s ine yayo yegoridhe Hollywood.
Vashoma vakatsanangura uye vakaudza nezve iwo makore nekutsunga kwakadaro uye kuchera kwavo kwakanyanya kutyisa. Uye nemutauro wakashata sekuoma kwawo. Ehe, panogona kunge paine fungidziro, asi kunzwa kwechokwadi kuri kukunda. Muchokwadi, kuuraya kunotyisa kwaElizabeth Short muna Ndira 1947 kwaive chaiko.. Ellroy akavimba nazvo, uye neyaamai vake chaivo, kunyora rimwe remazano ake akanakisa ne mufananidzo wemapurisa akati wandei vanova vamwe veavo vasingakanganwi. Uye hazvizove izvo kuti mifananidzo yemapurisa eLAPD iri kushomeka mune rese basa raEllroy.
Ini ndinokurudzira kuverenga zvakadzikama nekuti Dema Dahlia haisi nyore nyore. Zvakanaka, hapana chinhu pamusoro paEllroy chiri nyore. Asi kune avo vedu vanofarira nguva iyoyo uye, pamusoro pezvose, Ellroy anotyisa uye ane hunyanzvi maitiro, iri rimwe remabasa ake akanakisa.. Ehe, ngatirasei vhezheni yefirimu yakasainwa naBrian De Palma muna 2006. Ndezvipi zvisina maturo zvichienzaniswa neunyanzvi hwakagadzirwa naCurtis Hanson (DEP) LA Chakavanzika (1997). Tichataura rimwe zuva pamusoro pekugadziriswa kwefirimu kwakaitwa kumunyori uyu.
La chechina chikamu muzvikamu yenjodzi asi inonakidza uye nekudaro inodiwa (zviripachena kune vateveri vake) muongorori harry hole. Iyo hombe, inozviparadza, inoyevedza mupurisa Anodzoka mune imwe yematambudziko ake uye neimba brand twists. Kunge kutanga kwake kwakasarudzika, chimwe chezvakanakisa pane zvese.
Kubva ipapo, zvakare zvakare iwe unofanirwa kubhadhara kutarisisa kwako kwese kuteedzera kuferefetwa uye nezvinetso izvo izvi zvisingachinjiki Harry Hole zvinopinda mairi, kana kuzvisika iye amene. Muchiitiko ichi, Hole anotora kuferefetwa kwekubiwa kwemabhangi uko kwavakaurayawo mumwe wevashandi vavo. Izvi zvinotungamira kune gororo rine mukurumbira risingagoni kuve nemhosva nekuti riri mutirongo.
Kumubatsira iye achave naBeate Lønn, muongorori akasarudzika wemapurisa, ndiani anokwanisa kuona maficha emeso anenge otomatiki, asi nematambudziko ekuchengetedza hukama hwehukama. Beate Lønn zvakare mumwe wevanonyanya kudiwa mavara mune ese akateedzana., sekuziva kwevaya vakaverenga kare.
Zvakare, sezvo kuba kwakawanda kunoitika, Harry anopinda mumatambudziko. Achave mukuru wekufungidzira murufu rwekare musikana husiku humwe hunosara. Asi anomuka mangwanani kumba aine hangover inotyisa uye asina kana chaanorangarira. Saka uchafanirwa kuita zvese zvaunogona kuti uone zvakaitika.
Nekuti ivo vakakosha pamhando iyi, kunyanya Dema Dahlia. Kana pasina chinozivikanwa nezve basa raEllroy, iri zita rakanaka kutanga naro.. Icho chiri chechimiro chechinyakare uye hachisati chiine degree rekuomarara izvo zvinotevera zviri kuwana.
Uye zve Nemesis pane zvimwe zvishoma zvekutaura kana iwe uri Holeadicto, urikutora nhevedzano yake mune ino muunganidzwa weRed uye Nhema kana kuti watoverengera kana kuverenga zvekare. Kuti iwe uverenge zvakare pasina matambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » "Nemesis" uye "Iyo Nhema Dahlia." Kudzokorora kweNesbø naEllroy
Ugh, vaviri vane huremu hunorema Mariola, makore mazhinji apfuura ndakazvibvumira kuti ndibatwe, nemufaro, muEllroy universe, ndakaverenga quartet yeLos Angeles kaviri, uye ndichiri ndakabatwa muEllroy uya waunotsanangura. Kunyangwe kutaura chokwadi ndinofanira kutaura kuti ake anotevera mabasa akandibhadharira zvakawanda. Saga inotevera yandakatadza naye uye ndichiri kurangarira kusagadzikana kwemuverengi nemakona angu erima nenyaya yemhondi yake.
Uye pamusoro paNesbo, zvekutaura, nekuti ini ndiri muNesboadicta uye ndinofara kwazvo kuve mumwe nekuti zuva rega rega ndinonakidzwa naHarry Hole nenyika yake yese zvakanyanya.
Chinyorwa ichi chakandibata Mariola, maita basa kwazvo !!!
Chii chandingakuudza iwe chausati watoziva nezve vaviri ava ...? Ndatenda nekutaura.
Mark Heron akadaro
Ini ndinowana izvo zvandinofunga kuti ibug muNemesis uye ndingade kutaura nezvazvo kana paine chero munhu akaona chero pfungwa.
Pakupera kwechikamu chekutanga pane chitsauko chine musoro unoti "Kufungidzira" uko kwaanofungidzirwa kuti ndiye akapara imbavha kutaura mumunhu wekutanga. Anoti anonzwa Mwari mukati memaminetsi maviri aanopa vashandi kuti vatore mari, kutaura nezve mapfekero ake panguva yekubira, nezvimwe.
Mundima yekupedzisira anoti anoti akaona Muchinda uye kuti akamupa pfuti yeIsrael uye heino dambudziko: pakupedzisira zvinonzwika kuti gororo ndiani uye haana hukama neMuchinda. Zvakare, pane imwe nguva zvinonzi Muchinda anopa pfuti yeIsrael kuna Alf Gunnerud, iyo isina chekuita nembavha.
Uye kuti zviwedzere kuomarara, mundima yekupedzisira iye anoreva kuti mutauri ane chekuita nenyaya yaAna uye anoratidza kuti anoseka kana mapurisa achizviona sekuzviuraya. Gororo kana Alf Gunnerud havana kana chekuita nekuzviuraya kwaAna.
Pindura Marcos Garza
Phil Collins's Autobiography: "Ini Handisati Ndafa"